Himalaya Dainik » पेटको क्यान्सरले लियो डिएसपी केसीको ज्यान !
पेटको क्यान्सरले लियो डिएसपी केसीको ज्यान !
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) डम्बर बहादुर केसीको निधन भएको छ । बुधवार राती प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उनको निधन भएको हो ।
पेटको क्यान्सरबाट पिडीत केसी पुस २७ मा प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । गतराति उनको निधन भएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) बसन्त कुँवरले बताए । केही समयअघि उनलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा दरबन्दी भएका केसी खानेपानी बोर्डमा कार्यरत थिए । उनि बाग्लुङका स्थानिय हुन् ।
क्यान्सर जुनसुकै उमेर समूहका मानिस र शरीरको जुनसुकै भागमा हुनसक्ने रोग हो। विश्वमा क्यान्सर रोगका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपालमा पनि क्यान्सरका बिरामीको ंसंख्या वृद्धि भइरहेको तथ्यांकहरु छन्। चेतनाको अभावले धेरै मानिस क्यान्सर रोगलाई ‘ज्यानमारा रोग’ भनेर बुभ्mछन्।
पेटको क्यान्सरबारे शंका लागे तत्काल चिकित्सककहाँ गएर परीक्षण गराउनु सबैभन्दा उत्तम
तर, समयमै क्यान्सर भएको पत्ता लागेमा क्यान्सरलाई सजिलै निको पार्न सकिन्छ। पेट अर्थात आमाशयको क्यान्सर नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिने क्यान्सर मध्ये पर्दछ। सामान्यतया आमाशयको कोषिकामा गडबड हुनु नै पेटको क्यान्सर हुनु हो। पहिलो र दोस्रो स्टेजमा पेटको क्यान्सरको लक्षण पत्ता लागाउन गाह्रो हुन्छ।
पेटको क्यान्सरका लक्षणहरु यस्ता छन्ः १) सुरुमा ग्यास्ट्राइटिस भएजस्तो गरी पेट पोल्ने, २) पेट ढुस्स हुने, ३) औषधि खाँदा पनि पेट दुख्ने समस्या ठिक नहुने, ४) खानामा रुची घट्दै जाने, ५) पटक–पटक वान्ता आउने र वान्तामा रगत देखिने, ६) दिसामा पनि रगत देखिने, ७) शरीर सुक्दै जाने, ८) पेटमा पानी भरिएर फुलेर आउने।